I-FNB isiphinde yahlanganisa ithuba lokuthi noma wubani abe namasheya ezinkampanini zaphesheya. USLINDILE KHANYILE uyabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
I-Microsoft, iNetflix, Amazon, iTesla neCoca-Cola ngezinye zezinkampani okunethuba lokutshala imali kuzona ngokwe-exchange traded note
ISASASA lokuthengwa kwamasheya ezinkampanini zaphesheya ngendlela yokutshala imali okuthiwa yi-exchange traded note (i-ETN) isiyenze iFNB yaphinde yahlanganisa amanye amasheya alolu hlobo.
Ngonyaka odlule leli bhange lavulela abantu ithuba lokutshala ezinkampanini ezifana neNetflix, i-Amazon, iMicrosoft, iCoca-Cola nezinye imali eqala kuR10. UMnu uBheki Mkhize, isikhulu esiphezulu seFNB Wealth and Investment Solutions, uthe lamasheya athengwe ubuthaphuthaphu njengoba inani lalawo abantu abasatshale kuwo liwuR250 million. Bacela ku-10 000 abatshalimali abakhona kumanje.
Uthe izinkampani ezithandwa kakhulu yiTesla, iMicrosoft ne-Amazon. “Enye yezinto esizifundile wukuthi ama-ETN athandwa kakhulu yilawo athintekayo uma kunomnyakazo phakathi kwerandi ne-dollar. Bawu-75% abantu abakhethe leyo bese kuthi lena enye engathinteki bawu-25% abantu abakhethe leyo.
“Into esiyibonile wukuthi abantu bacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi irandi liyowa uma liqhathaniswa ne-dollar, nokusho ukuthi uma bekhetha le Ndlela (ehambisana nokushintsha kwamandla emali) kuyoba ngcono. Into esiyibonile wukuthi abantu abaningi abayiqondi ukuthi isebenza kanjani leyo nto, ngakho kudingeke ukuthi sibafundise ukuthi kusebenza kanjani, bahweba kanjani futhi bagada kanjani ukuthi amasheya abo aqhuba kanjani.”
UMnu uMkhize, isikhulu esiphezulu seFNB Wealth and Investment Solutions
Ama-ETN yindlela yokutshala imali eyenza ukuthi izinkampani, imvamisa okuba ngamabhange, zikwazi ukuhlanganisa iqoqo lamasheya ezinkampani ezithile bese kwehliswa inani kwelijwayelekile.
Kulama-ETN abawakhiphile manje bagxile kakhulu ezinkampanini ezithathwa ngokuthi indlela ezenza ngayo umsebenzi wazo yilena esigqugquzelwa futhi nethathwa njengezoba mqoka kusasa.
Lezi yizinkampani ezigxile ekuqikeleleni ukuthi indlela ezisebenza ngayo ayingcolisi imvelo, zonga amanzi, zisebenzisa nogesi ongaphehlwa ngamalahle; nothathwa ngokuthi awuyoni imvelo futhi ziyabanakekela abantu.
UMkhize uthe uma ebhekwa la maqoqo ezinkampani abazihlanganisile, yizinkampani okuwukuthi zikhula noma zibuyisa inzuzo ephezulu. Mlalele echaza.
UMkhize uthe baye baphakamise ukuthi umuntu akatshale okungenani isikhathi esiyiminyaka eyisihlanu kuya phezulu bese ekhohlwa yile mali ukuze ezobona inzuzo ebhekile.
Uthe nakuba izimakethe zishintshashintsha kodwa uma utshala isikhathi eside loko akusho lutho.
Nakuba imali ongaqala ngayo ukutshala kuwuR10 kodwa alinqunyiwe inani lemali ephezulu, ungafaka noma ngabe yimalini onamandla ayo.